किन राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई कारबाही गर्‍यो ? | Samabesi Khabar
किन राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई कारबाही गर्‍यो ?
नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको लगानी गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बेंकले एनबी बैंकलाई ४ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
कुनै बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरे लगानी नभएको कर्जाको ब्याज बराबर जरिवाना राष्ट्र बेंकले गर्ने गरेको छ । सोहि अनुसार लगानी पुर्याउन नसकेको रकमको ब्याज बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएको हो ।
यसपाली जरिवाना तिर्नु पर्दैनः एनबी बैंक
एनबी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा कृषिमा मात्रै थोरै रकम नपुगेको जानकारी दिएको छ । अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले तोकिए अनुसारको लगानी भएको बैंकले बतायो । यसपाली भने कृषिमा पनि तोकिएको लगानी पुग्ने बैंकका सुरेश देबकोटाले दाबी गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा नै तोकिएको लगानी पुरा भएको प्रवक्ता देबकोटाले बताए । ‘गत वर्ष थोरै नपुगेको हो, यसपाली सबै क्षेत्रमा तोकिएको लगानी पुग्छ’ उनले भने, ‘यस वर्षको ५ महिनामा नै हामीले कृषिमा १० प्रतिशत पुर्याइसकेका छौं ।’